CentOS Linux 8.4 dị ugbu a na ndị a bụ mgbanwe ya | Site na Linux
CentOS Linux 8.4 dị ugbu a na ndị a bụ mgbanwe ya
Ọchịchịrị | 03/06/2021 12:23 | Emelitere ka 14/06/2021 23:05 | Nkesa
Mgbe ọnwa 8 nke ikpeazụ mbipụta wepụtara ntọhapụ nke ọhụrụ update version nke nkesa CentOS 8.4 (2105) n'ime emeela mgbanwe site na Red Hat Enterprise Linux 8.4. Ngalaba a nke CentOS Linux 8 ga-aga n'ihu na-enweta mmelite ọhụrụ ruo na njedebe nke afọ, nke ga-emecha kwụsị maka ihu ọma nke okpu Red na-etinye ihe ndị ahụ na CentOS Stream.
Ma ọ bụ dị ka anyị kwurula ebe a na blog dị iche iche isiokwu, CentOS Stream ga-eji dochie CentOS ochie 8 na njedebe nke afọ, ọ ga-ekwe omume ịlaghachi na nsụgharị ndị gara aga nke ngwugwu site na iji iwu "dnf downgrade", ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ nsụgharị nke otu ngwa na repository.
E meela ọrụ iji mee ka aha ebe nchekwa dị iche iche dị (repositories), nke belata na obere (dịka ọmụmaatụ, a na-eji "appstream" dochie aha "AppStream"). Iji gbanwee gaa na CentOS Stream, gbanwere aha ụfọdụ faịlụ na ndekọ ndekọ /etc/yum.repos.d, melite repoid, ma mezie ojiji nke ọkọlọtọ “–enablerepo” na “–disablerepo” na ederede gị.
1 CentOS Linux 8.4 Isi Akụkụ Ọhụrụ
2 Budata CentOS 8.4
CentOS Linux 8.4 Isi Akụkụ Ọhụrụ
Na mgbakwunye na atụmatụ ọhụrụ ewepụtara na RHEL 8.4, ọdịnaya nke nchịkọta 34 agbanweela na CentOS 8.4 (2105), gụnyere anaconda, dhcp, Firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit na yum. Mgbanwe na nchịkọta na-ejedebe na nchịkọta aha na ngbanwe nke ihe osise, gbakwunyere ngwugwu RHEL dịka redhat- *, ndị ahịa nghọta, na ndenye aha-njikwa-Mbugharị * wepụrụ.
Dị ka RHEL 8.4 maka CentOS 8.4, a na-emepụta modulu AppStream ndị ọzọ na nsụgharị ọhụrụ Python 3.9, SWIG 4.0, Subversion 1.14, Redis 6, PostgreSQL 13, MariaDB 10.5, LLVM Toolset 11.0.0, Rust Toolset 1.49.0 na Go Toolset 1.15 .7.
Buut iso na-edozi nsogbu ebe a manyere onye ọrụ iji aka tinye mirror URL iji budata nchịkọta. Na mbipute ọhụrụ ahụ, onye nrụnye na-ahọrọzi enyo kacha nso nso onye ọrụ ahụ ka ndị mmepe kwuru na enwere obere okporo ụzọ na isi iyi CentOS RPM ma e jiri ya tụnyere ya.
ọnụọgụ abụọ RPM, n'ihi ya, ha na-ewere ya na ọ bụ ihe ekwesighi itinye ọdịnaya a na enyo mbụ.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ chọrọ ịdị ka ọdịnaya a, ha nwere ike ịme ya site na iji iwu reposync dị na ngwugwu yum / dnf-utils. A na-eji otu igodo ahụ abanye na isi mmalite ndị RPM iji banye ọnụọgụ abụọ ha.
A na-ewepụta mmelite ndị emere ka ewepụtara na mbupute izizi ụkpụrụ ụlọ. Anyị na-akwado ndị ọrụ niile ka ha tinye mmelite niile,
Banyere mbipụta mara Ọ na-kwuru na mgbe wụnye a ọhụrụ update version Na VirtualBox, ị ga-ahọrọ ọnọdụ "Server with GUI" ma jiri VirtualBox abụghị okenye karịa 6.1, 6.0.14 ma ọ bụ 5.2.34, ebe ọ bụ na ọ bụghị na a ga-enwe nsogbu.
Ọzọkwa, RHEL 8 kwụsịrị nkwado maka ụfọdụ ngwaọrụ ngwaike nke ahụ ka nwere ike ịdị mkpa. Ihe ngwọta nwere ike ịbụ iji kernel centosplus na foto iso nke ndị ọrụ ELRepo kwadebere ya na ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ.
Usoro akpaaka iji tinye AppStream-Repo anaghị arụ ọrụ mgbe ị na-eji boot.iso ma wụnye ya n'elu NFS na PackageKit enweghị ike ịkọwapụta mgbanwe DNF / YUM mpaghara.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya Banyere ụdị ọhụrụ a, ị nwere ike ịlele nkọwa dị na esonụ njikọ.
Budata CentOS 8.4
N'ikpeazụ maka ndị niile nwere mmasị ịwụnye ụdị ọhụrụ nke sistemụ a kwesiri ịga na ebe nrụọrụ weebụ ha na na ngalaba nbudata ya ị nwere ike nweta onyinyo nke usoro ahụ, njikọ ahụ bụ nke a. Foto a dị maka gị iji mejuputa na igwe ọ bụla, nakwa dị ka na ngwa ọ bụla ọzọ nke na-enye ohere ịmepụta igwe arụmọrụ, dị ka VirtualBox ma ọ bụ Gnome Boxes.
Nkesa ahụ zuru oke ọnụọgụ abụọ kwekọrọ na RHEL 8.4 yabụ CentOS 2105 na ụlọ ndị a kwadebere ya dị njikere maka nbudata ma ọ bụ ihe oyiyi DVD 8 GB ma ọ bụ netnet 605 MB maka x86_64, Aarch64 (ARM64) na ppc64le architectures.
Ihe nchịkọta SRPMS nke ọnụọgụ abụọ na ihe ọmụma na-adabere na ya dị site na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » CentOS Linux 8.4 dị ugbu a na ndị a bụ mgbanwe ya
Jami "Maloya" rutere na ndozi interface, ịdị n'otu ndị ahịa maka Windows na Linux na ndị ọzọ
Chrome OS 91 bịarutere na nkwado nnyefe faịlụ, ndozi nchekwa na ndị ọzọ